माइतीघर त साँच्चिकै माइतीघर रहेछ : प्रम (सम्बोधनको पूर्णपाठ) - News Portal of Global Nepali
काठमाडौँ-प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठूलो बलिदानबाट प्राप्त गरेको उपलब्धिको रक्षा गर्नु सबैको साझा दायित्व र कर्तव्य भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आफूबाहेक अरु आएकोलाई पनि स्वीकार्नुपर्ने बताउँदै आफू आए ठीक छ, आफू नआए बेठीक छ भनी प्रणालीलाई चल्न नदिने हो भने लोकतन्त्र चल्न नसक्ने बताए । उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध विभिन्न प्रकारका तत्व घोर दक्षिणदेखि घोर वामसम्म, अति वामपन्थी तत्वदेखि अति दक्षिणपन्थी तत्वसम्म, अति वामउग्रपन्थीदेखि अति दक्षिण प्रतिक्रियावादी समूह एक जुट भएको अवस्थामा त्यसप्रति सजग हुनुपर्ने र लोकतान्त्रिक शक्तिका बीचमा एकता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त गरेको विचारको पूर्ण पाठ:
आश्चर्यलाग्दो गरी आज अगाडिदेखि तय भएको प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने ११ बजेदेखि भन्ने पहिले आफूले बोल्न पाउनुपर्छ भनेर नेपाली कांँग्रेसले अड्डी लियो । अड्डी मात्रै लिएन प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न रोक्नका लागि वेलमा गएर संसद्को कामकारवाहीलाई अवरोध ग¥यो । विषय केही पनि थिएन । कुनै विषयमा मतभेद पनि होइन । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा बोल्न पर्दा पहिले प्रधानमन्त्रीले, त्यसपछि विपक्षी दलको नेताले, त्यसपछि मर्यादा क्रमका व्यक्तिले बोल्ने कुरा विश्वव्यापी प्रचलन हो । त्यो जहाँ पनि हुन्छ तर हरेक क्षेत्रमा निहुँ खोज्ने त्यस उद्देश्यअन्तर्गत नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति, लामो समयदेखिका मेरा मित्र, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पनि अलि लामै समय साथ दिएका शेरबहादुर देउवा आफैँले नेतृत्व गरेर प्रधानमन्त्रीले होइन मैले बोल्न पाउनुपर्छ भनेर वेल घेर्ने कामको नेतृत्व गरेर अगाडि जानुभयो । आश्चर्यचकित भएँ म । उहाँलाई संसदीय मर्यादा त्यति थाहा हुनुपर्ने हो । जे होस् संसद् अवरुद्ध भयो ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध विभिन्न प्रकारका तत्व घोर दक्षिणदेखि घोर बामसम्म, अति वामपन्थी तत्वदेखि अति दक्षिणपन्थी तत्वसम्म, अति वामउग्रपन्थीदेखि अति दक्षिण प्रतिक्रियावादी समूह एक जुट भएको अवस्था छ । त्यसप्रति सजग हुनुपर्ने लोकतान्त्रिक शक्तिहरुका बीचमा एकता हुनुपर्ने हो त्यो नभएको मात्रै होइन, त्यसलाई बिथोल्न लोकतान्त्रिक शक्ति नै अग्रसर भएको देख्दा आश्चर्य लाग्छ । यही कुरा २००७ सालको आन्दोलनपछि साथ लिई मिलेर चल्नुपर्ने ठाउँमा परिवर्तनकारी शक्तिलाई प्रतिबन्ध लगाउने र प्रतिक्रियावादी शक्तिसँग मिलेर चल्ने गलत नीतिको कारणले संविधान बन्न लामो समय लाग्यो र उपयुक्त संविधान बन्न सकेन । दुई हजार सात सालपछि त्यही नीतिको कारणले, प्रतिक्रियावादीसँग मिल्ने कारणले र प्रगतिशील शक्तिहरुलाई देखी नसहने कारणले, जनपक्षीय शक्तिलाई देखिन सहने कारणले २०१७ साल जस्तो घटना भयो । त्यस्तो प्रतिगामी घटना हँुदा पनि एकता गर्न मानिएन । लोकतन्त्रका पक्षधर शक्ति तानाशाहीका विरुद्ध लडौँ भन्ने प्रस्ताव पनि मानिएन । विचित्रको एउटा लोकतन्त्रको आवरणभित्र एउटा प्रतिक्रियावादी प्रतिगामी सङ्कीर्णवादी चरित्र रहेको छ ।
त्यो हाम्रा विचारहरु एकैचोटि ४०÷४५ लाख भ्यूअर्सले एकै चोटि हेरेको हामीलाई बताइएको थियो । मैले बोलिरहेका बेला पनि ४० लाखको सङ्ख्यामा भ्यूअर्स पुगेको जानकारी गराइएको थियो । त्यस ठाउँमा हामीले नेपालका उपलब्धि, नेपालका आवश्यकता, नेपालको अवस्थाबारे जानकारी दियौँ । नेपाल कता जान चाहन्छ, नेपाल कसरी अगाडि बढ्न चाहन्छ भन्नेबारे र नेपालका आकाङ्क्षाहरु बतायौँ ।
त्यसै गरेर फ्रान्समा प्रधानमन्त्रीय टोली, पार्लियामेन्ट्री कमिटीका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखलगायतसँग भेटघाट भयो । खास गरी प्रधानमन्त्रीसँग द्विपक्षीय हितका विषयमा कुराकानी भए । त्यहाँका व्यापारिक समुदायसँग छलफल भए र छुट्टाछुट्टै विभिन्न व्यापारिक कम्पनीसँग छुट्टाछुट्टै रुपमा कुराकानी भयो । उहाँहरुलाई हामीले नेपालमा लगानीका लागि आमन्त्रण गर्ने काम ग¥यौँ ।
त्यसै गरेर जेनेभामा आइएलओको साइडलाइनमा र औपचारिक ठाउँहरुमा पनि हामीले टर्कीका उपराष्ट्रपति, नर्वेका प्रधानमन्त्री र स्विट्जरल्याण्डका पूर्वराष्ट्रपतिसँग समेत ग¥यौँ । अरु सङ्क्षिप्त भेटघाटहरु भयो, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासभाका अध्यक्ष, दक्षिण अफ्रिका राष्ट्रपतिलगायतसँग भेटघाट भयो र नेपालका बारेमा राम्ररी हामीले ध्यानाकर्षण ग¥यौँ । यसरी हामीले नेपालको अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा भूमिकालाई विस्तार गर्ने काम गरेका छौँ ।
राजनीतिक शक्तिहरुलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, पटक पटक जनताका अधिकार दरबारमा बुझाइएको इतिहास आवेश, उत्तेजना र भावनामा बगेर नदोहो¥याऔँँ ।
हाम्रो समाज एउटा शिष्ट, सभ्य मर्यादित समाज हो । हाम्रो टेलिभिजनले तपाईं भन्न कसैलाई पनि जान्दैन । तपाईं भन्ने नेपाली भाषाको शब्दै हराइसक्यो । हाम्रो सञ्चारमाध्यमले हाम्रो भाषा, संस्कृतिका कुरा गर्छ । नेपाली भाषामा त बाबुलाई तपाईं नै भन्ने चलन हुन्छ । बाबुलाई पनि तिमी, आमालाई पनि तिमी, हजुरआमालाई पनि तिमी, हजुरबाबुलाई पनि तिमी, यो त नेपाली भाषा, नेपाली सभ्यता, नेपाली संस्कृतिभित्र पर्दैन । कतिलाई मन पर्दैन मैले भनेको कुरा । सबै समान हुन् भन्ने मात्रै पर्ला । सबै समान बोल्दाखेरि कुनै भाषा कस्तो हुन्छ ? कुनै भाषामा जेण्डर छुट्टिएको हुँदैन । कुनै भाषामा आदरार्थी शब्द हुँदैन । कुनै भाषाको आफ्नो मर्म हुन्छ । हाम्रो भाषाको आफ्नै मर्म छ । त्यो मात्रै होइन, सामाजिक सञ्जालको अवस्था के छ ? र, सामाजिक सञ्जाललाई गुरु थापेर हाम्रा स्थापित सञ्चारमाध्यमहरु पनि तिनलाई फलो गर्नेतिर लाग्ने हो ? भाषा, सभ्यता, शैली, बोलाइ, चलाइमा हामी कस्तो समाज सिर्जना गछौंँ ?